लीलानाथ निरौला रावाबेसी गाउ“पालिकाका अध्यक्ष हुन् । विद्यार्थी काल (२०३९साल)देखि तत्कालीन मालेबाट राजनीति सुरु गरेका निरौला २०५४ सालदेखि निरन्तर एमाले जिल्ला कमिटीका सदस्य हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी बनेका हुन् । ५० वर्षीय निरौला यतिखेर गाउ“पालिका समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटेका छन् । उनीसंग गरिएको कुराकानी :
तपाईले कार्यभार संहालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । के परिवर्तन गर्नु भएको छ ?
यो एक वर्षको अवधि केन्द्र विवादमै लगभग बितेको छ । पुनर्संरचना आयोगले तोकेको केन्द्र खार्पा हरमटार र नाम लामीडा“डाबाट रावाबेसी गाउ“पालिका बनाइएको छ । यही विषयमा परेको मुद्दा खेप्दै धेरै समय बिताउनु पर्ने वाध्यता आइप¥यो । तर अहिले मुद्दा किनारा लागिसकेको छ । मुद्दा किनारा लागेपछि केही काम भएको छ । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता विषयमा राम्रै काम भएको छ ।
सडकमा त त्यति राम्रो देखिएन । जताततै सडक खनिए पनि ग्रेडिङ नमिलेकाले यातयात सञ्चालनमा समस्या देखियो । यसको स्तरोन्नति कहिले गर्नु हुन्छ ?
गाउ“पालिकाको सबै वडामा सडक पुगेको छ । केही ग्रेडिङ मिलेको छैन । ग्रेडिङ मिलाउने काम भइरहेको छ । केही सडक यसै वर्ष स्तरोन्नति भइरहेको छ भने केही आगामी आर्थिक वर्षमा हुने छ । बाह«ैमास सडक सञ्चालन हुने सडक बन्ने छ ।
शिक्षामा के परिवर्तन भयो ?
शिक्षा नियमावली बनाएर काम थालनी गरिएको छ । गुणस्तर शिक्षाका लागि सबै विद्यालयमा कक्षा–१–५ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन–पाठन सुरु गरिएको छ । सबै विद्यालयमा इलेक्ट्रोनिक हाजिरी सुरु भएको छ । गुणस्तरमा गुणात्मक विकासका लागि अन्य विभिन्न योजना बनाउ“ने योजना बनाइएको छ ।
स्वास्थ्यमा कुनै परिवर्तन आयो ?
आएको छ । सबै वडामा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ । २४ घण्टे अनमी नियुक्ति जस्ता काम भएको छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने खालको काम भएका छन् । अझै अन्य सेवा सुविधाहरुको खोजी गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
कृषिमा कुनै उल्लेख्य काम भएको छ ?
भएको छ । सिंगो रावाबेसी गाउ“पालिकामा कृषि पर्यटनको अवधारण बढाइएको छ । यसका लागि थप अध्ययन र गुरुयोजना बनाएर जाने योजना बनाइएको छ । यस बाहेक बिऊ, मल लगायत आधुनिक औजार वितरण गरिएको छ ।
विद्युतको हालत सुधार भएको देखिएन । यसका लागि कुनै पहल गर्नु भएको छ ?
योजना बनाइएको छ । सबै वडामा आगामी वर्षबाट विद्युत पुग्ने गरी काम भइरहेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा कस्तो छ योजना ?
रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन जस्ता सञ्चारको माध्यम विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाइएको छ । टेलिफोन टावरहरु समेत विस्तारका लागि पहल गर्ने योजना बनाइएको छ ।
युवा रोजगारको कुनै योजना बनाउनु भएको छ ?
योजना बनाइएको छ । शीपमुलक तालिम दिलाएर युवालाई उद्यमी बनाउने योजना बनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारभन्दा गाउ“मै काम गरेर आयआर्जन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट थप विस्तृत गर्ने योजना बनाइएको छ ।
तपाईको कार्यकालमा रावाबेसी गाउ“पालिकाका कस्तो बनाउने लक्ष्य लिनु भएको छ ?
सबैले अनुभूति हुने खालको विकास हुने छ ।